Maqaallada Thibaut de Lataillade Martech Zone |
Maqaallada by Thibaut de Lataillade
Thibaut De Lataillade, GetApp GVP, wuxuu leeyahay waayo-aragnimo ka badan 25 sano oo ku saabsan maareynta ganacsiga, iibinta, iyo suuq-geynta hoostiisa. Waxa uu leeyahay rikoodh la xaqiijiyay oo ku saabsan daruuraha, dhaqdhaqaaqa, suuq-geynta dhijitaalka ah, CRM, suuq-geynta, iibinta, iyo xeeladaha koritaanka. Thibaut waxa uu jagooyin maamul iyo mid fulinba ka soo qabtay shirkado teknooloji oo waaweyn sida Cegedim iyo SAP.
Sida Bilawgu Uga Gudbi Karaan Caqabadaha Tignoolajiyada Suuqgeynta Guud
Isniin, November 8, 2021 Jimco, Nofeembar 12, 2021 Thibaut de Lataillade
Erayga "bilawga" waa mid soo jiidasho leh indhaha dad badan. Waxay kicisaa sawirada maalgashadayaasha xiisaynaya oo eryanaya fikrado milyan-dollar ah, goobo xafiisyo qurxoon, iyo korriin aan xadidnayn. Laakiin xirfadlayaasha tignoolajiyadu waxay ogyihiin xaqiiqada soo jiidashada yar ee ka dambeysa khiyaaliga bilowga: kaliya helitaanka cag ee suuqa waa buuro aad u weyn oo la fuulo. Marka GetApp, waxaanu ka caawinaa kuwa bilowga ah iyo ganacsiyada kale inay helaan software-ka ay u baahan yihiin si ay u koraan oo ay u gaadhaan hadafkooda maalin kasta, waxaanan baranay